Vaovao - Ahoana ny fomba hanatsarana ny fahombiazan'ny famokarana amin'ny alàlan'ny fandaharam-pianarana machining CNC
Ao amin'ny milina mazava tsara ao amin'ny CNC, ny fomba hanatsarana ny fahombiazan'ny famokarana amin'ny alàlan'ny fandaharam-pianarana machining centre dia fepetra takiana ho an'ireo mpampiasa milina. Ny antony miantraika amin'ny fahombiazan'ny milina CNC dia misy ny olana amin'ny fitaovana, ny olana eo amin'ny sehatry ny milina, ny masontsivana sns ... ary ireo fiasa ireo dia misy fiatraikany amin'ny fandaharam-pianarana milina fametahana cnc, ka misy fiantraikany ankolaka amin'ny fahombiazan'ny vokatra.
Voalohany indrindra, alohan'ny fandaharana ao amin'ny ivon-toeran'ny milina CNC dia tokony handinika tsara ny sary ny vokatra, hamolavola ny làlan'ny fanodinana ny vokatra ary hanomana ireo fitaovana milina mety. Amin'ny alàlan'ny fiantohana ny fahamendrehan'ny milina, ny tontolon'ny milina dia tokony alamina indray mandeha arak'izay azo atao, mba hampihenana ny fotoana fanodinana ny sehatry ny milina. Tokony hodinihina izy io rehefa fandaharana ao amin'ny ivon-toeran'ny milina CNC.
1. Amin'ny fametrahana indray mandeha sy fametahana indray mandeha, ny fanodinana dia tokony ho vita indray mandeha arak'izay azo atao, mba hampihenana ny fotoana fanodinana ny sangan'asa, hanafohezana ny fotoana fanampiana ary hampihena ny vidin'ny famokarana;
2. Amin'ny fizotry ny fandaharana dia tandremo ny fahamendrehan'ny fanovana fitaovana hampihenana ny fotoana fanovana fitaovana. Ny faritra havoakan'ny fitaovana iray ihany dia tokony ho vita indray mandeha arak'izay azo atao, mba hialana amin'ny fandaniana fotoana ateraky ny fanovana fitaovana matetika sy fanatsarana ny fahombiazan'ny famokarana;
3. Mba hampihenana ny fotoana fandehanan'ny milina sy hanatsarana ny fahombiazan'ny famokarana, ny saina dia tokony homena ny fitsipiky ny fanodinana laharam-pahamehana ireo faritra mifanila amin'ny fandaharana;
4. Ao amin'ny fandaharana, raha dinihina ny fomba fanodinana sangan'asa marobe miaraka, ny fanodinana workpieces marobe amin'ny fotoana iray dia afaka mampihena ny fotoana fanidiana sy fametahana.
5. Amin'ny dingan'ny fandaharana dia ilaina ny misoroka ny famerimberenana torolàlana diso ary mihetsika haingana tsy misy fanjakana mitondra entana hampihena ny fotoana fiandrasana.
Ho fanampin'ireo anton-javatra etsy ambony ateraky ny fahombiazan'ny fandaharam-pianarana machining CNC, ny fahamendrehan'ny famolavolana ny famokarana vokatra dia mety hanafohezana ny fotoana fanodinana fanampiana. Raha fintinina, maro ny anton-javatra misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny milina CNC. Ny fandinihana ny antsipiriany dia azo antoka fa manatsara ny fahombiazan'ny fanodinana.